Nomad Yakakwasharara Pet Tag uye Rugged KeyChain yeMweyaTags | Ndinobva mac
Zvishandiso zveAirTags zvinoramba zvichiyerera zvakawanda kubva kumugadziri kuenda kumugadziri. Nomad ndomumwe weava vagadziri vazhinji vatendeuka kuvhura zvishongedzo zvechigadzirwa uye maawa mashoma apfuura zvakaburitsa zvishongedzo zvitsva zveizvi locator zvishandiso zvakaratidzwa neApple mumwedzi wapfuura.
Mune ino kesi ndicho chakakosha Yakakwenenzverwa Pet Tag uye Yakakwenenzverwa KeyChain yeMweyaTags. Nomad inyanzvi mukugadzira zvigadzirwa zvinopesana nematsotsi, mvura, guruva, nezvimwe. uye mune ino kesi ivo vagadzira inodzivirira kiyi mhete uye yakakosha mhete kuturika iyo AirTag pane yedu chipika kora.
Mune ino kesi, izvo zvishongedzo zveNomad AirTag zvine mutengo wekudzikisa kuvhurwa kwavo sezvatinogona kuona pawebhusaiti yekambani uye izvi unogara pa $ 29,95 pane ese maviri ma key. Pasina kupokana, kana iwe uchitsvaga inoshingirira keychain yeApple locator, izvi zvinogona kungoita imwe sarudzo. Uye ndezvekuti maApple akanaka asi zvine musoro anogona kudzikisira nekufamba kwenguva, dzimwe sarudzo dzakachipa dzinogona kugara zvishoma kana kupa kunzwa kwekusachengeteka sezvo zvigadzirwa zvekugadzira zvisina kuratidzwa mune ino nyaya hatizove nematambudziko.
Tinoenda nemi iyo Nomad webhusaiti saka unogona kuwana izvi zvishongedzo uye nevamwe vazhinji. Semazuva ese mune ino kesi tinokurudzira kutenga kuburikidza neMagnificent webhusaiti sezvo ivo vachizosununguka pamitengo inogona kuitika uye iri yepamutemo yekuparadzira iyo inozivikanwa inozivikanwa yeCalifornian firm.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » Accessories » Nomad Yakakwasharara Pet Tag uye Rugged KeyChain yeMweyaTags